Hanaraka ny dian’ny Emira Arabo Mitambatra sy hanasivana ny tolotra VoIP ve i Syria? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2018 14:47 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Ελληνικά, Español, Français, English
Miantehitra amin'ny fampiharana VoIP hifandraisana amin'ny havan-tiany ny Syriana an-tapitrisany nafindra toerana noho ny ady . Sary avy amin'i samer daboul tao amin'ny Pexels
Nivoaka voalohany tao amin'ny smex.org ty lahatsoratra nosoratan'i Grant Baker ity. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ity dikan-dahatsoratra nasiam-panitsiana ity.
Ny 17 Oktobra 2018 dia nanambara ny Manampahefana Mpandrindra ny Fifandraisandavitra Syriana (TRA) fa mety hanomboka hanakana tsy ho ela ny antso sy ny antso miaraka amin'ny sary ao amin'ny WhatsApp sy ny tolotra hafa ao amin'ny arofenitra an'aterineto (VoIP) izy ireo.
Nilaza ny TRA fa hanao izany izy ireo mba hampitomboana ny vola miditra amin'ny indostrian'ny fifandraisandavitra, araka ny voalazan'ny Al-Watan, gazety iray mifandray amin'ny fitondrana Syriana. Nitaraina ny tale jeneralin'ny fandrindrana Ibaa Oueichek fa “mampihena ny fiverenan'ny fampiasam-bola ho an'ny orinasan'ny [fifandraisandavitra] ny VoIP ary mampihena ny fahazotoan'izy ireo hanao fampiasam-bola vaovao hanatsarana ny tambajotra ary hanolorana tolotra tsara kokoa amin'ny vidiny mora kokoa.”
Tahaka ny governemanta hafa ao amin'ny faritra, sy any Afrika Atsimon'i Sahara, mahaliana ny fampanantenana amin'ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny orinasam-pifandraisandavitra eo an-toerana, na dia eo aza ny enta-mavesatra omen'izy ireo ny olom-pirenena.
Raha ampiharina, dia mety hampitombo ny sandan'ny fifandraisana izay efa lafo ao amin'ny firenena ity fandraràna ity ary hampihena ny fikorian'ny vaovao. Handrahona ny zon'ny Syriana amin'ny fiainana manokana ihany koa izany ary mety hitarika amin'ny fanivanan-tena misimisy kokoa ao amin'ny firenena.
Amin'izao fotoana izao, orinasa roa no mifaninana amin'ny tsenan'ny fifandraisandavitra finday ao Syria: SyriaTel, izay an'ny rahalahin'i Bashar al-Assad antsoina hoe Rami Makhlouf, sy ny MTN Syria, sampan'ny Vondrona MTN Limited any Afrika. Ny governemanta no mifehy ny fotodrafitrasa amin'ny aterineto sy ny onjam-pifandraisana amin'ny alalan'ny sampan-draharahan'ny governemanta miisa roa, ny Syrian Computer Society (SCG) sy ny Syrian Telecommunications Establishment (STE). Ny SCG izay naorin'i Bashar Assad no mifehy ny fotodrafitrasa 3G ao amin'ny firenena, raha ny STE kosa no nametraka ny rafitra fanaraha-maso manerana ny firenena voalohany tamin'ny taona 1999 , izay manana ny fotodrafitrasa an-tariby rehetra. Ahafahan'ny manampahefana Syriana mora foana mitsikilo ny mpisera izany.
Raha toa ka voasivana ny WhatsApp sy ireo tolotra VoIP hafa miafin-tsoratra dia tsy hanan-tsafidy afa-tsy ny fampiasana ny tolotra fifandraisandavitra fehezin'ny governemanta ny Syriana, ka hahatonga ny fifandraisany manokana ho marefo kokoa ho an'ny governemanta hitsikilovana
Midika izany fa ny governemanta Syriana dia afaka mihaino mora foana ny resaka ataon'izy ireo ary hanangona ny angondrakitry ny fifandraisany. Fantatra tsara fa mividy sy mampiasa fitaovana fanaraha-maso samihafa hitsikilovana ny olom-pirenena ny governemanta. Mora ny maminavina fa raha tsy manan-tsafidy ny Siriana afa-tsy ny fampiasana ny tolotra fifandraisandavitra ao an-toerana, dia hanararaotra ity teknolojian'izy ireo izay tsy dia azo antoka loatra ity ireo manampahefana ary hampitombo ny fahazarany mitsikilo vahoaka.
Hanokatra làlana iray ho an'ny fitaovana vaovao hafa lafovidy sy mampidi-doza ihany koa ny fiovana tahaka izany. Rehefa nandrara ny tolotra VoIP, anisan'izany ny Skype, Viber ary WhatsApp dia mpandraharahan'ny finday anankiroa ao amin'ny firenena sisa no napetraky ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra, ny Etisalat sy Du , mba hampidirana ny tolotra VoIP azy ireo manokana. Tsy vitan'ny hoe lafo ireo tolotra ireo, fa afaka miditra amin'ny angondrakitry ny mpanjifa sy ny antso ataon'izy ireo ihany koa ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra, izay manamora ny fanaraha-maso.
Mba hampitomboana ny tombombarotra dia mety hametraka ny tolotra mitovy amin'izany ireo orinasam-pifandraisandavitra ao Syria. Mety hampisy alonalona eo amin'ny olom-pirenena ny tolotra vaovao fa ho voaaro ny fifandraisan'izy ireo, raha ny tena marina anefa dia mety ho marefo toy ny antso an-telefaonina mahazatra izany.
Raha mbola afaka miala amin'ity fandraràna ity ny mpisera ao Syria amin'ny alàlan'ny fitrohana VPN, dia tsy ao anatin'izany ireo izay tsy mahay loatra ny teknolojia sy ireo izay manana fidiram-bola voafetra. Lafo vidy ny ankamaroan'ny VPN ary ireo maimaimpoana kosa matetika mitsongo fitety ary mamela ny hafa hiditra amin'ny angondrakitry ny mpisera, ka manampy faharefoana ho an'ny mpisera.
Raha manaiky ity fanakanana tolotra VoIP ity ny mpandrindra ny orinasan'ny fifandraisandavitra dia i Syria no firenena farany indrindra ao amin'ny faritra hanangana ny politikam-pamerana toy izany. Ankoatra ny Emirà Arabo Mitambatra, nosakanan'i Katara ny fidirana amin'ny tolotra VoIP, raha mbola manakana ny Viber sy ny WhatsApp kosa i Arabia Saodita taorian'ny nanalefahany ny famerana tamin'ny fampiasana ny fampiharana VoIP tamin'ny herintaona. Nanakana vetivety ny fidirana amin'ny VoIP ny firenena hafa ao amin'ny faritra toa an'i Libanona tamin'ny taona 2010 sy Maraoka tamin'ny taona 2016, saingy nofaranan'izy ireo haingana ireo hetsika ireo.